ကုမ္ပဏီအများစုက e-commerce သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်ကြသည်။ သင်တီထွင်ရန်သို့မဟုတ်သေရန်လိုသည်၊ သို့သော်အွန်လိုင်းရောင်းချမှုကိုသူတို့နည်းတူရောင်းသောအောင်မြင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပြtheနာသည်အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ချဉ်းကပ်နည်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်တွင်များစွာသောသူတို့သည်ဆာဗာစိတ်ဓာတ်ကို အသုံးပြု၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတည်းကိုသာမှီခိုအား ထား၍ ကုန်ပစ္စည်းများကိုဖောက်သည်များထံပေးပို့နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအဖြစ်မြင်ကြသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုမည့်အစား e-commerce ကိုအရောင်း ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက် (သို့) ၀ ယ်သူအသစ်များကိုရှာဖွေနေစဉ်လက်ရှိစားသုံးသူများ၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်စေသောအရောင်းစာရေးအဖြစ်ရှုမြင်သင့်သည်။
ဒီတော့ခင်ဗျားရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ရှိနေခြင်းဟာအလုပ်သမားလား၊ ဆာဗာလားဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ Alexander Peresunko, ကျွမ်းကျင်သူ Semalt သည် သင်၏ stratgie numica ကိုအဆုံးသတ်သောအခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရ မည့်အရာများကို ရှင်းပြသည်။
၁။ သင်၏ site သည်ရောင်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ
အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များကြောင့်သင်၏ site ကိုဖြည့်စွက်ရန်အရောင်းပြခန်း၊ catalog နှင့် ၀ န်ထမ်းများမရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်လက်ရှိဖောက်သည်များအားရောင်းချသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိရန်မလုံလောက်ပါ။ သင်၏လက်ဗွေရာကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်အောင် e-commerce site သည်ထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်ရန်အလားအလာသစ်ကိုယုံကြည်ရမည်။
စတင်ရန်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်စာမျက်နှာများသည်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ရန်ဖောက်သည်ကိုစည်းရုံးရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာမျက်နှာများသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းရန်ပျက်ကွက်ပါကဖောက်သည်သည်ထို site သို့သာရုတ်သိမ်းသည်။ About page၊ home page နှင့်ပင်မပေါ်လစီသည်အသုံးပြုသူအသစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိစေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင့်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ္တူတစ်ခု၊ ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နေရာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံပညာနှင့်ရေကြောင်း / ပြန်လည်ပေးပို့မှုမူဝါဒအသစ်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီများရင်ဆိုင်ရသောအသုံးအများဆုံးစိန်ခေါ်မှုများအနက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ဖက်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်တိုက်ရိုက်သုံးစွဲသူများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိသော်လည်းဤကုမ္ပဏီအများစုသည်အုတ်နှင့်အင်္ဂတေနည်းစနစ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များကိုအောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါက၊ အလားအလာကိုငြင်းဆန်။ မရသောပြင်းထန်သောအရောင်းမြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအရောင်းအ ၀ ယ်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကျန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
ညစာစားပြီးသည့်အခါပုံမှန်စားပွဲထိုးကသင့်အား“ မင်းပြန်လာမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်” ဟုပြောလိမ့်မည်။ သို့သော်ရောင်းသူကောင်းတစ် ဦး သည်အပိုမိုင်ကိုသွားပြီး t-နံပါတ်များအပါအ ၀ င်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရလိမ့်မည်။ တယ်လီဖုန်းနှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖောက်သည်များ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများ။ အဘယ်ကြောင့်? client ကိုအောက်ပါ၏တစ် ဦး တည်းသောရည်ရွယ်ချက်သည်။
အောင်မြင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့ site သို့အလားအလာအသစ်များပို့ဆောင်သည့်တိုင် visitors ည့်သည်အနည်းငယ်မှအမှာစာများရရှိကြသည်ကိုသိသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကူးပြောင်းနှုန်းသည် ၂-၃% ရှိသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်မှာကျန်ရှိသော ၉၇% သော visitors ည့်သည်များပြန်လာရန်စည်းရုံးခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့ဆာဗာများသည်သုံးစွဲသူများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်အတွက်ရှာဖွေပေးသောရှာဖွေမှုကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့သည်အမှတ်တံဆိပ်မရှိသောစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်းသူတို့၏ချဉ်းကပ်မှု၏ပေါင်မုန့်နှင့်ထောပတ်သည်အမှတ်တံဆိပ်သော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပမာဏသည်သူတို့လက်ထဲတွင်အများဆုံးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရှိပြီးသားအသံပမာဏကိုထိရောက်စွာနှင့်အကျိုးရှိစွာအသုံးချသည်။
ရောင်းသူတစ် ဦး အနေနှင့်ပြုမူသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုရောင်းသူတစ် ဦး ကဲ့သို့ဆက်ဆံပြီးလစာရှာဖွေမှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ရရှိရန်အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဖောက်သည်များကိုပေးချေသူအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကို၎င်းသည်၎င်းတို့အသုံးပြုသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သူတို့သည်အနုတ်လက္ခဏာပစ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးပြု၍ မလိုအပ်သောကြော်ငြာများကိုလျှော့ချသည်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာသူတို့ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုလိုအပ်တဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေနဲ့အကာအကွယ်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်အများစုဟာစီးပွားရေးမဟုတ်တဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေရဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေကို ၀ ယ်တယ်။
နှိုင်းယှဉ် - စျေးဝယ်အင်ဂျင်
ဆာဗာအမျိုးအစားများသည်နှိုင်းယှဉ်အင်ဂျင်များကိုမလိုက်နာနိုင်ပါ။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ချန်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်တိုင်နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ ၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏အခြားအွန်လိုင်းကုန်သည်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်တွန့်ဆုတ်နေသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ အထင်ကြီးစရာကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်စာမျက်နှာများ၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်မြင့်မားခြင်း၊
“ Salesperson” တံဆိပ်သည်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး Nextag၊ eBay စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် Google Shopping စသည့်နှိုင်းယှဉ်အင်ဂျင်များကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ဤအင်ဂျင်များကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့တွင်မြင့်မားသောယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောကုန်ပစ္စည်းများရှိပါက၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်စားသုံးသူအသစ်များကိုအသည်းအသန်ရှာဖွေနေသည်။ သူတို့၏ site သည်လူကြိုက်များသောကုန်ပစ္စည်းများကိုထိရောက်စွာရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်။
Server-type စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် SEO လမ်းကြောင်းကိုထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောပြproblemနာသင်အသွားအလာတိုးမြှင့်ဖို့အာဏာမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်၏လက်ရှိအသွားအလာသည်အမှတ်တံဆိပ်စည်းကမ်းချက်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ site သို့လာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဆာဗာတစ်ယောက်ဟုတ်မဟုတ်သိရန်သဘာဝရှာဖွေမှုအတွက်မြေပုံစာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပါ။ အသုံးပြုသူအများစုသည်သင်၏မူလစာမျက်နှာပေါ်တွင်အဓိကဆင်းသက်လေ့ရှိသော်လည်းသင်အံ့သြသွားပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်အတွင်းစာမျက်နှာများတွင်လုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
“ ရောင်းချသူ” ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်အမှတ်အသားမဟုတ်သောသော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အတွက်အလားအလာအသစ်များရရန် SEO ကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စည်းကမ်းချက်များသည်သော့ခတ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းအဓိကရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကို အသုံးပြု၍ အသွားအလာအသစ်ကိုမောင်းနှင်ရန်အချိန်ပိုကုန်သည်။ Server ၏ Home page နှင့်မတူသည်မှာဤလုပ်ဆောင်မှုအများစုသည်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အမျိုးအစားစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။
Waiter တံဆိပ်၏မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုသည်ပွင့်လင်းသောဆွေးနွေးမှုနှင့်ဆင်တူသည်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ၀ င်ရောက်သူအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲသူသည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်များသောအားဖြင့်စကားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
စီးပွားဖြစ်ချဉ်းကပ်မှုသည်စားသုံးသူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်ယာဉ်အသွားအလာကိုဖန်တီးရန်အတွက်ပလက်ဖောင်း၏အထောက်အပံ့များကိုအသုံးပြုသည်။ အရောင်း။
အခြေခံအားဖြင့်၊ သင်သည်ဖောက်သည်ဝယ်ယူရေးလမ်းကြောင်းများအနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ပါကမှန်ကန်သောမက်ထရစ်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ရမည်။ စတင်ရန်၊ ချန်နယ်တစ်ခုစီနှင့်သင်မည်မျှ ၀ ယ်သည်ကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းကိုသင်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်ချန်နယ်တစ်ခုချင်းစီနှင့်စတင်သင်ကြားနိုင်သည်။